ICS ကိုမြှင့်လို့မရလို့ပါ..... - MYSTERY ZILLION
October 2012 edited October 2012 in Help Desk
ကျွန်တော် Sony Ericsson Xperia arc ကို offcial software သုံးပြီး ics ကိုမြှင့်တာ "The phone contains modified software that cannot be updated" ဆိုပြီးလာပြနေပါတယ်။ root ​ကြောင့်များလားဆိုပြီး unroot လုပ်လိုက်တော့လဲ မထူးပါဘူး...ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရနိုင်ပါသလဲ...လာပြတဲ့ Msg Box ကတော့ အောက်မှာပါ..
မဟုတ်ဘူးဗျ။ bootloader unlock လုပ်ထားလို့ပါ။
relock ပြန်လုပ်လိုက်ပါ or flash tool နဲ့သွင်းပါ။
flash tool နဲ့သွင်းနည်း
I'm OK now. Thank you for your help, Mr.yixin.
ကျွန်တော် ကိုyixin ​ပြောတဲ့နည်း(၂)ခုလုံးသုံးလိုက်ရတယ်ဗျ...relock လုပ်ပြီး Sony PC Companion သုံးပြီး လုပ်တာ Android 2.3.2 ကနေ 2.3.4 ကိုပဲရတယ်...နောက်တစ်နည်းနဲ့လုပ်မှ ICS ကိုရသွားတော့တယ်...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..bro yixin